Madaxweynaha Hirshabelle oo kulan la qaatay safiirka UK iyo kulamo ay wada qaateen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
16th June 2021 MM Af Soomaali 0
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ku sugan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka ayaa kulan la qaatay Safiirka Dowlada Ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Kate Foster.
Kulankaan dhexmaray Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Safiirka ayaa waxaa looga hadlaayay Arrimaha Doorashooyinka, ilaalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed, Amniga, Bini’aadanimada iyo dhismaha gole yaasha deegaanka.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa la wadaagay baaxada dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha Wabiga shabeelle, isagoo ugu baaqay in loo gurmado dadkii ka barakacay fatahaadihii ka dhacday Hirshabeelle oo dhibaato xoogan heysato.
Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa dowladda Ingiriiska ka dalbaday taageerada tababarada ciidamada booliiska iyo Daraawiishta si ay ugu filnaadaan amniga guud ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa wada dadaalo kala duwan oo uu xal ugu raadinayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada Fatahaadaha ku soo laab-laabtay deegaanada maamulkiisa, waxaana Caasimadda maamulkaas ay xiligaan Go’doosan ugu jirtaa biyaha Webiga Shabeelle.